Mataanaha Fresh'n Rebel, oo isku dayaya inuu hagaajiyo meesha ay AirPods ku dhacaan | Wararka IPhone
Mataanaha Fresh'n Rebel, oo isku dayaya inuu hagaajiyo halka ay AirPods ku foogan yihiin
Fresh'n Rebel ayaa hada soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay dhagaha dhagaha ee "True Wireless" carwada IFA ee magaalada Berlin, waxayna ku sameysaa iyadoo ka faa'iideysaneysa guusha AirPods, iyadoo soo bandhigeysa wax soo saar naqshad aad u la mid ah laakiin hagaajinta qodobbada ay AirPods ku horumarin karaan: midabada, qiimaha, caabbinta dhididka, ergonomiska, iwm.
Qiimaha kaliya € 99,99, mataanahan runta ah ee wireless-ka ah ayaa doonaya inay si adag ula tartamaan headphones-ka wireless-ka ah ee Apple, runtuna waxay tahay Waxay soo uruuriyaan maaddooyin badan si ay awood ugu yeeshaan inay u istaagaan iyaga haddii ay fuliyaan wax kasta oo ay ballanqaadaan. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta hoose.
Waxa ugu horreeya ee boodboodaya markaan aragno dhagaha dhagaha cusub waa midabkooda. Waxaan haynaa iyaga oo lagu heli karo midab casaan, midab fudud iyo mugdi, cagaar, buluug iyo maroon, si aan u dooran karno kuwa aan aadka u jecel nahay. Laakiin sidoo kale waxaan leenahay laba nooc oo kala duwan oo aan iibsan karno: oo leh silsilado silikoon ah (Twins Tip) ama la'aantood.Markaa wax dhibaato ah ma jiri doonto haddii aad doorbideyso suufka inuu kala sooco buuqa banaanka oo uu sifiican ugu haboonaado ama haddii aad doorbideyso tusaalaha caadiga ah maxaa yeelay wuxuu si fiican ugu habboon yahay dhegtaada oo iyagaa adiga kugu habboon.
Waxay u adkeysanayaan dhididka si aad ugula tababbarto isboortiga iyaga oo aan dhibaato yar qabin, Waxay haystaan ​​xaddiga 4 saacadood oo lacag buuxa ah, sanduuqa waxaa sidoo kale ku jira illaa shan lacag dheeraad ah, sidaa darteed waxaan ku raaxeysan karnaa illaa 24 saacadood oo dib loo maqli karo innaga oo aan ku dhejin, ama ku dhejinno saldhig wireless ah, maxaa yeelay sanduuqa lacag-bixinta ayaa la jaan qaada Qiimaha wax lagu rakibo. Haddii aad rabto inaad isticmaasho fiilo, waxaa ku jira isku xiraha USB-C ee dib-u-soo-buuxinta, kaas oo lagu gaarayo illaa hal saac.
Inta soo hartay ee qeexitaanku waxay aad ugu egyihiin kuwa AirPods: toos u shidid ama u xir marka aad banaanka u soo saarayso ama aad ku ridi karto sanduuqa, taabashada kontaroolada ee loo maqli karo iyo adeegsiga caawiye (Siri ama Kaaliyaha Google), iyo suurtagalnimada adoo adeegsanaya sameecado walba si madaxbannaan labada warbaahin iyo wicitaanno labadaba. Sidaan soo sheegnay, waxay umuuqataa in € 99,99 aan kuheli karno "AirPods Killer" kaamil ah Fresh'n Rebel Twins True Wireless in aan ku haysan doono dukaamada dhawaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Mataanaha Fresh'n Rebel, oo isku dayaya inuu hagaajiyo halka ay AirPods ku foogan yihiin
Maxay Apple u tahay nooca loogu jecel yahay Spain haddii ay dirqi iibiso?
Kobcin wanaagsan dakhliga Apple Store ee laga filayo ciyaaraha iyo TV-ga